विराटनगरमा अघोषित लोडसेडिङ भएको ? - हिपमत
विराटनगरमा अघोषित लोडसेडिङ भएको ?
लकडाउनको महसुलमा पनि २५ प्रतिशत व्याज ।
प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगरमा केहि दिन देखि दैनिक चार–पाँच पटक सम्म बिजुली काट्ने गरिएको छ । तीन वर्ष देखि लोडसेडिङ्ग मुक्त भएको विराटनगरमा अचानक दिनको चार–पँच पटक सम्म विजुली काट्नुलाई अघोषित लोडसेडिङ्गको रुपमा स्थानीयले लिएका छन् ।
१० दिनयता पटक–पटक लोडसेडिङ भएपछि सर्वसाधारण हैरान भएका छन । पुर्व सूचना बिना नै पटक–पटक लाइन काट्दा ग्राहकहरुले लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको हो । निकै लामो समय पश्चात लोडसेडिङको अनुभव गर्न पाएका बिराटनगरबासी प्राधिकरणले गुनासो समेत सुन्न नखोजेको गुनासो गरे ।
महसुल तिरेर विजुली बाली रहेका सर्वसाधारणले लकडाउनको अबधिमा महसुल बुझाउन नसक्दा २५ प्रतिशत व्याज समेत बुझाएका छन् । तर, बिना कुनै सुचना राती खाना खाने बेला देखि विद्यार्थीहरुले अनलाई कक्षालिने बेलामा झ¥याप झ¥याप लाईन जाने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो रहेको छ ।
लाइन काट्दाको समस्या प्रत्येक्ष खेपी रहँदा पनि विराटनगर वितरण केन्द्रले लोडसेडिङ नभएको जनाएको छ । विद्युत प्रधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका सुचना अधिकारी भरत केसीले प्राविधिक कारणले लाइन काट्नु पर्ने भए पनि लोडसेडिङ नभएको हिपमत डटकमलाई जानकारी दिएका छन ।
नेपाल विद्युतप्रधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रबाट ७० हजार सेवाग्राहीले विद्युतको सेवालिदै आएका छन ।